Lumbini Online | » माटो पनि आयात ! माटो पनि आयात ! – Lumbini Online
माटो पनि आयात !
काठमाडौँ, ११ भदौ । जो कोहीले नपत्याउला ! कतै माटोपनि भन्सार तिरेर आयात गरिन्छ । तर, त्यसो होइन सेरामिक्स उद्योगमा प्रयोग हुने माटो भन्सार तिरेर आयात गर्नु बाध्यता बन्दै गएको छ । आधुनिक सेरामिक्सका सामान बनाउन प्रयोग गरिने माटो भारतबाट ल्याउनुपर्छ । भारतबाट आयात हुने उक्त माटो खरिद गर्दा व्यापारीले लगभग २४ प्रतिशत कर र भ्याट तिर्नुपर्छ ।
आधुनिक र अत्याधुनिक सेरामिक्स उद्योग यहाँ नगन्य मात्र रहेकाले यहाँ सालिन्दा माटोबाट तयारी समानको आयात बढेको छ । यसवर्ष रु चार अर्ब ३७ करोड २९ लाख ७५ हजारको विभिन्न प्रकृतिका माटोबाट निर्मित सामान भित्रिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
नेपालले घरायसी रुपमा प्रयोग हुने उक्त सामान विश्वका २८ मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको छ । भारत, चीन, जर्मनी, बेलायत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, भियतनाम, दुबइ, स्पेन, इटाली, अर्जेन्टिना, स्वीडेन, श्रीलङ्का, स्वीजरल्यान्ड, अष्ट्रिया, बङ्गलादेश, टर्की, दक्षिण कोरिया, कतार र जापानलगायत देशबाट उक्त सामान आयात गर्ने गरेका पाइएको छ ।
भान्छामा प्रयोग गरिने कप, तथा डिनर प्लेट, सजावटका सामग्री एवम् शौचालयमा प्रयोग गरिने टायल, प्यानलगायत सामान उक्त देशबाट आयात हुँदै आएका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले स्वदेशमा कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा उत्खनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । सेरामिक्स उद्योगको सम्भावना छ । तरपनि यसवर्ष यहाँबाट रु पाँच करोड ५७ लाख ७२ हजारको सेरामिक्स (हस्तकला) प्रयोजनका सामान निर्यात भएको छ ।
“माटो र श्रमशक्तिबाहेक अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ । सरकारले भन्सार छुट दिने हो भने मात्र आधुनिक सेरामिक्स उद्योग चलाउन सकिन्छ”– नेपाल सेरामिक्स सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विक्रम प्रजापतिले भन्नुभयो । उद्योगी दिनेश प्रजापतिले कहिलेकाहीँ कच्चा पदार्थ आयातका नाममा भन्सारबाट तयारी सेरामिक्सका सामान भित्र्दा स्वदेशी उद्योगले प्रतिपस्र्धा गर्न नसकी दर्जनौँ उद्योग बन्द भएका उदाहरण दिनुभयो ।
“नेपालमा सेरामिक्स उद्योग सञ्चालनमा आएको झन्डै तीस वर्ष पुगेको छ । तर, परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेन”–उद्योगी शिवशङ्कर प्रजापतिले भन्नुभयो । धातु, स्टिल र प्लास्टिकका भाँडाकँुडा नपाइँदा मानिसले आफ्नो जीवनगुजारा गर्न माटाका थाल, गाग्रो, बचत गर्ने भाँडो (खुत्रुके) लगायत सामान निर्माण गर्दथे ।
समयसँगै परम्परागत भाँडाको सट्टामा अत्याधुनिक भाँडाको प्रयोग गर्न थाल्यो । क्रमशः विश्वमा आधुनिक सेरामिक्सका सामान प्रयोग हुन थाले । तर, नेपालमा अझैसम्म स्वेदशलाई धान्न सक्ने सेरामिक्स उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । विश्वमा सबैभन्दा धेरै सेरामिक्सका सामान प्रयोग गर्ने देश चीन हो । चीनले भान्सामा अधिकांश सेरामिक्सका भाँडा प्रयोग गर्छन् । सेरामिक्स उद्योगतर्फ विश्वले आफूलाई अत्याधुनिक र आधुनिक बनाउँदै लगेपनि यहाँ स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका सेरामिक्स उद्योगले हस्तकलाका सामानलाई प्राथमिकता दिएको नेपाल हस्तकला महासङ्घले जनाएको छ ।
गमला, सामान्य कप, डिनर तथा चिया प्लेट, चुरोटदानी, बालबालिकाका खेलौना, फूलदानी र विभिन्न आकर्षक जनावरका चित्रमा सीमित बन्न गएको सेरामिक्स उद्योगलाई आधुनिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो । रासस